Waare ayaa ku tilmaamay niyad xumo iyo kala tag haddii uu qabsoomi waayo shirka loo… – Hagaag.com
Waare ayaa ku tilmaamay niyad xumo iyo kala tag haddii uu qabsoomi waayo shirka loo…
Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa niyad xumo iyo kala tag weyn ku tilmaamay haddii uu qabsoomi waayo wajiga saddexaad ee shirka loo madlan yahay inuu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb si go’aan midaysan looga gaaro doorashooyinka soo socda.
Inkastoo madaxweynaha Hirshabeelle uu rajo ka muujiyay qabsoomida shirkaas, hadana wuxuu sheegay baaqashadiisa in ay keeni karto faro galin shisheeye iyo in loo arko in Soomaalida aysan dhexdeeda tashan karin.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay shirkaas qabsoomdiisa in ay ku xiran tahay sida uu u shaqeeyo guddiga farsamada ee loo xilsaaray, isagoo caddeeyay in madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu ay diyaar u yihiin xagooda.
“Waxaan ku bogaadinayaa guddiga waqtiga yar uu haysto iyo tallaabooyinka uu qaaday,” ayuu yidhi madaxweyne Waare oo ka hadlayay kulan uu la qaatay guddiga farsamada doorashooyinka.
Waqtigii la iskugu imaan lahaa shirka Dhuusamareeb ayaa maalinta berrito ku beegan, iyadoo aysan weli muuqan in shirka furmi doono, balse madaxtooyada ayaa caddeysay in shirku dhici doono waqtigii loogu talo galay.